တရုတ်နိုင်ငံ၏ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ်က ဂြိုဟ်နီကြီး၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် စူးစမ်းရှာဖွေရေးရက်ပေါင်း ၁၀၀ ပြည့်ပြီ - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ် ကျူးလုံမှ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးထားသော မြင်ကွင်းကျယ်နေရာအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- CNSA/Handout via Xinhua)
ပေကျင်း၊ ဩဂုတ် ၃၁ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ် (rover) ကျူးလုံ (Zhurong) သည် မေ ၂၂ ရက်က အင်္ဂါဂြိုဟ်ပေါ်သို့ စတင်ရောက်ရှိပြီးချိန်မှစ၍ ဂြိုဟ်နီကြီး (အင်္ဂါဂြိုဟ်) မျက်နှာပြင် စူးစမ်းရှာဖွေရေး ရက်ပေါင်း ၁၀၀ ကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်ကြောင်း တရုတ် အမျိုးသား အာကာသစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန (CNSA) က ဩဂုတ် ၃၀ ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ်သည် ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းသွားယာဉ် (orbiter) နှင့် ဂြိုဟ်ပေါ်ဆင်းသက်ယာဉ် (lander) တို့ ပါဝင်သော တရုတ်နိုင်ငံ၏ထျန်းဝန်-၁ (Tianwen-1) မစ်ရှင် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါ မစ်ရှင်အား ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဇူလိုင် ၂၃ ရက်က လွှတ်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကျူးလုံယာဉ်သည် အင်္ဂါဂြိုဟ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ၁,၀၆၄ မီတာ ခရီးနှင်ပြီးဖြစ်သလို ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းသွားယာဉ်က ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းအတွင်း ရက်ပေါင်း ၄၀၃ ရက်ရှိပြီဖြစ်သည်။ ၎င်းယာဉ်နှစ်ခုစီးလုံးသည် အခြေအနေကောင်းမွန်း၍ ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း CNSA အရ သိရသည်။
၎င်းအာကာသယာဉ်များသည် နေက ကမ္ဘာနှင့် အင်္ဂါဂြိုဟ်ကြား တစ်တန်းတည်းရောက်ရှိချိန် စက်တင်ဘာလကုန်ဝန်းကျင်တွင် sun outage ဖြစ်စဉ်ကို ကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်ပြီး နေရောင်ခြည်ဓာတ်ဖြာထွက်မှုက အာကာသယာဉ်များနှင့် မြေပြင်စခန်းများအကြား ဆက်သွယ်ရေးကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။
ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းကြောင်းသွားယာဉ်နှင့် ဂြိုဟ်ပေါ်သွားယာဉ်တို့သည် sun outage ဖြစ်စဉ် ပြီးဆုံးသည်အထိ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို ရပ်နားထားမည်ဖြစ်ကြောင်း CNSA က ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, Aug. 30 (Xinhua) — China’s Mars rover Zhurong has spent 100 days exploring the red planet’s surface since it first set its wheels on Martian soil on May 22, according to the China National Space Administration (CNSA) on Monday.
Image taken by China’s Mars rover Zhurong shows the panorama of the site. (CNSA/Handout via Xinhua)